एक घण्टाको तीन करोड ! – " कञ्चनजंगा News "
एक घण्टाको तीन करोड !
No Comments on एक घण्टाको तीन करोड !
काठमाडाैं । बलिउड नायिका उर्वशी रौतेले एक घण्टाको पर्फमेन्सका लागि तीन करोड भारतीय रुपैंया पारिश्रमिक लिएकी छिन् । स्पटब्वाईले उल्लेख गरे अनुसार एक घण्टा पर्फमका लागि यो रकम निकै धेरै हो । उक्त पत्रिकाले यो रकम अहिलेसम्मकै धेरै भएको दावी गरेको छ ।
उर्वसीले बीमार दिल, बिजलीकी तार, हसिनोको का दीवानालगायतका फिल्ममा डान्स गर्ने भएकी छिन् । मिस टीन इण्डिया र मिस दीवा जस्ता उपाधी जितेकी २५ वर्षिय यी नायिकाले हिन्दी चलचित्र ‘सिंह साहब दि ग्रेट’वाट डेब्यु गरेकी थिइन् । यसपछि उनले सनम रे, ग्रेट ग्रेण्ड मस्ती, हेट स्टोरी ४लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् ।
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता प्रेमका किस्साहरु रहेका छन् जो अधुरै रहे । सलमान खानलाई धोका दिदैँ ऐश्वर्याले अभिषेक बच्चनसँग विवाह गरिन् । त्यस्तै कुनै समय चर्चामा रहेका अभिषेकले करिश्मा कपुरलाई धोका दिए ।
विहेका लागि दिन पनि तोकिएको थियो । तर, अभिषेकले विवाह गर्न मानेनन् । उनले ऐश्वर्यालाई विवाह गरे । बलिउडकी अर्की चर्चित अभिनेत्री हुन् कटरिना उनले सलमान खानलाई धोका दिदै रनवीरसँग अफयेर चलाइन् ।
रनवीरलाई पनि धोका दिदै उनी फेरि सलमानको अँगोलमा बेरिन पुगिन् । अक्षय कुमारले सिल्पा सेट्टीलाई विवाह गर्ने वचन दिए । तर, विवाह भने टिवइकल खन्नासँग गरे । कुनै समय निकै चर्चामा थियो संजय दत्त र माधुरीको अफयेर । तर, संजय हातहतियार विवादमा फसेपछि माधुरीले संजयलाई धोका दिइन् ।
← श्रीमानकै साथीसंग माया बसेर भागेकी श्रीमतीले श्रीमानलाइ फोन गरेर भनिन्, ‘तिम्रो माया धेरै लाग्यो मलाई लिन आउ’ → बलिउडका यी पाँच अभिनेत्री, जोसँग छैन भारतीय ‘नागरिकता’